Iincwadi Iingcaphuno ezivela kwi-Movie & TV
Ukucaphulwa kwentliziyo-ntliziyo 'KwiNcwadana'
I-movie "I-Notebook" ishintshana kwincwadi enomxholo ofanayo. Ibali elithandanayo lixelelwa yindoda endala, uDuke, efunda kumfazi omdala kwikhaya labahlengikazi. Ukukhwabanisa kweengqungquthela zefilimu kusenza sihleke size sikhale kunye nabalingisi abahamba phambili, u-Allie noNowa, abathandana kodwa bahlukaniswa ngabazali bakhe. Kwiminyaka kamva u-Allie udibana nelijoni elicebileyo, eLon, kwaye uyazibandakanya naye.
Xa uNowa ebuya, kufuneka akhethe phakathi kwamadoda amabini. Ezi ngcaphuno ezivela "I-Notebook" zijolise kumandla amangalisayo othando.
Wayeyinkwenkwe yelizwe, wayevela kweso sixeko.
"Khangela amakhwenkwe ... yindoda yam entle apha, andiyi kumshiya. Le yindlu yam ngoku. Unyoko lakho ikhaya."
"[UNowa] wayenombono entloko yakhe ukuba ukuba abuyisele indlu yakudala apho beza khona ngalobo busuku, u-Allie wayenokufumana indlela yokubuyela kuye. Kodwa eneneni, uNowa wayedlwengule. "
"Andiyena mntu okhethekileyo." Ngowomntu oqhelekileyo eneengcamango eziqhelekileyo, ndikhokele ubomi obufanayo. Akukho zikhumbuzo ezinikele zona kwaye igama lam liza ku libala, kodwa ngenyameko enye ndiphumelele njengoko owake waphila. Ndiyamthanda omnye ngentliziyo yonke nomphefumlo wam kwaye kuye kwahlala kwanele. "
"Ngoku uyazi ukuba ndifuna ukukunika yonke into oyifunayo, kodwa andinako ngenxa yokuba bayekile ... Baphukile."
"Ngeke kube lula, kuya kuba nzima kakhulu kwaye siya kufuneka sisebenze kule mihla, kodwa ndifuna ukwenza oko kuba ndifuna wena. kum. "
"Uthando olungcono luhlobo oluvusa umphefumlo; oko kusenza sifinyelele ngakumbi, esitshisa umlilo ezintliziyweni zethu aze alethe uxolo kwiingqondo zethu." Yiloo nto enethemba lokuba ndikunike ngonaphakade. "
"Ndikubhalile iileta ezingu-365. Ndakubhalela yonke imihla yonyaka. Akuzange kube ngaphezu ... akupheli."
"Yeka ukucinga ngento endiyifunayo, into ayifunayo, oko abazali bakho bafuna. Ufuna ntoni na?"
"Ndifuna indlu emhlophe ngamatyhularha eluhlaza kunye negumbi elijongene nomlambo ukuze ndipende."
"Ucinga ukuba uthando lwethu lungenza imimangaliso?"
"Kwakunjalo, akunjalo, wena kunye nam." Kwangaxesha elide elidlulileyo, sasingabantwana abathathu kuphela kodwa sasithandana ngokwenene, akunjalo? "
"Ewe, kwiingcamango, sonke sinama-million, kodwa ngokwenene, siphila kunye neqela lamaqhenqa."
"Indlela endiyibonayo, ndinokuzikhethela ezintathu.Eminye, ndinokumdubula." Eminye, ndinokukhaba umkhonto kuye, okanye emithathu, ndikushiye. kwezo zikhetho zifumana mna. " [malunga noNowa]
'I-Santa Clause' Quotes
Amacandelo okufundisa ukuqhubeka nokulwa nabafundi basebenza
Yintoni isifundo sakho sokufunda?